भ्रष्टलाई नामेट पार्न जाग हे अख्तियार ! : RajdhaniDaily.com - भ्रष्टलाई नामेट पार्न जाग हे अख्तियार !
Home बिचार भ्रष्टलाई नामेट पार्न जाग हे अख्तियार !
यतिखेर मुलुकमा सुशासनको दियो बाल्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राज्य सञ्चालनमा मुख्य भूमिकामा रहेका अन्य संवैधानिक आयोगलाई समेत कमजोर बनाउने गरी विभिन्न खाले हर्कत हुन थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि यही विषयलाई जोडेर संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति पनि बदर गरिनुपर्ने कलुषित आवाज उठिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय र संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएको विषय फरकफरक विषय हुन् । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस र नियुक्तिको विषय प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँग जोड्न जरुरी छैन ।
अहिले अख्तियारलाई विभिन्न कोणबाट प्रहार गरेर हुर्मत लिने केही षड्यन्त्र पनि भइरहेका छन् । प्रधानन्यायधीशसमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति भएको हो । संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने मुख्य निकायको प्रमुख नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायधीशले नै अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई शपथ खुवाएर काम गर्ने बाटो खोलिदिएका हुन् । त्यसैले अहिले पनि यो विषयलाई विवादको विषय बनाउनुका पछाडि ठूलै स्वार्थ समूह लागिरहेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत नदिएर रिटलाई सामान्य अवस्थामा राखेको छ । त्यसैले यतिखेर अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न कुनै बाधा पर्ने अवस्था छैन । तर, विभिन्न खालका गलत कथा बुनेर यतिखेर अख्तियारको नवनियुक्त नेतृत्वलगायतका पदाधिकारीको मनोबल गिराउने र उनीहरूलाई कामै गर्न नदिने काला षड्यन्त्र पर्दाभित्र बुनिन थालेका छन् ।
ती सबै षड्यन्त्रलाई अख्तियारका प्रभावकारी एक्सनले परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा उठ्न पुगेको छ । त्यसैले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायको अन्य नेतृत्व यस्ता काला हर्कतसँग डराएर बस्नुहँुदैन । अब भ्रष्टचारीको मुटु काम्ने र हल्लिने गरी छिटोभन्दा छिटो एक्सनमा जानुपर्छ । वर्षांैदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा दादागिरि मच्चाउँदै आएका आर्थिक माफियाले विगतदेखि अख्तियारलगायतका राज्यका महŒवपूर्ण निकायमा आफू निकटका व्यक्तिलाई लैजाने र उनीहरूकै संरक्षणमा आर्थिक अपराध मच्चाउने कुचेष्टा गर्दै आएका हुन् । विभिन्न कालखण्डमा उनीहरू सफल पनि भएका थिए । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राज्यका विभिन्न महŒवपूर्ण पदमा रहनेसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्र्दैै अकुत सम्पति आर्जन गर्ने अपराधीका अहिले सबै बाटा बन्द हुन थालेपछि उनीहरू बर्बराउन थालेका छन् । त्यस्ता अपराधी अनेक भेषमा छन् ।
अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायका अन्य नेतृत्व यस्ता काला हर्कतसँग डराएर बस्नुहँुदैन । अब भ्रष्टचारीको मुटु काम्ने र हल्लिने गरी छिटोभन्दा छिटो एक्सनमा जानुपर्छ
अनेक भेषमा रहेका त्यस्ता अपराधीले सम्पति शुद्धीकरण गरेर करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैले सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यस्ता अपराधीलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्नेगरी आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नुहँुदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका ती निकायसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रमा रहेका आर्थिक अपराधीलाई पाता कस्ने वातावरण सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । यसैगरी राजस्व छली गर्ने राजस्वमारालाई राजस्व अनुसन्धान विभागमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । कमिसनखोर, भ्रष्ट, बिचौलिया र तस्करलाई अब आलिसान महलबाट सडकमा पु¥याउन सक्नुपर्छ ।
पक्कै पनि भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने काम सहज छैन । भ्रष्ट, माफिया र तस्करको जगजगी रहेको हाम्रो समाजमा इमानदार व्यक्तिलाई काम गर्न र बाँच्नै कठिन छ । भ्रष्टको जरा उखेल्न खोज्दा आफंै हट्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था पनि हामी कहाँ छ तर हिम्मत हार्नुहँुदैन । सत्यको जित निश्चित छ ।
सरकारका अधिकांश निकाय भ्रष्टचारको अखडा बन्ने र उनीहरूसँगको अपवित्र गठबन्धनले निजी क्षेत्र तथा अन्य व्यक्ति विशेष मोटाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ व्यापक छ । त्यसैले पनि अब अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई सिस्टममा हिँड्ने बनाउन सक्नुपर्छ । अहिले जहाँ जहाँ सरकारी निकाय सिस्टममा हिँड्न सकेका छैनन् त्यहाँ नै बढी भ्रष्टचार र कमिसनतन्त्र हावी छ । कमिसनतन्त्रको समुल नष्ट गर्नुपर्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि, वन, यातायात, राजस्वलगायतका क्षेत्रमा माफिया, तस्कर र बिचौलियाको बिगबिगी छ । अब अख्तियारले ती सबै क्षेत्रलाई सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
अख्तियारले यो तेरो, त्यो मेरो नभनीकन भ्रष्टचार गर्ने र बेथिति गर्नेविरुद्ध आगो बाल्नुपर्छ । राज्यसंयन्त्रका विभिन्न निकायमा वर्चस्व जमाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने माफिया, बिचौलिया र तस्करले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायलाई पनि विभिन्न प्रपञ्च गरी आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रयास गर्छन् । विगतमा पनि पटकपटक त्यस्ता प्रयास हुँदै आएका हुन् । अहिले अख्तियारको नेतृत्वलाई त्यसरी नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था नआएपछि त्यो कुतŒव विभिन्न नक्कली कथा रचेर अख्तियारका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीको चरित्र हत्या गरी उनीहरूको मनोबल गिराउने अपराधिक खेलमा लागिरहेको छ ।
विगतमा सरकारका विभिन्न निकायमा रहँदा कतिपय सरकारी कामको सिलसिलामा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा भएका केही निर्णयलाई आधार बनाएर अख्तियार प्रमुखलाई नै भ्रष्टाचार गरेको अनावश्यक आरोप लगाउने काम गरिएको छ । नागरिक समाजले स्वतन्त्र छानबिन गरोस् । अख्तियारको नेतृत्वलाई आरोप लगाउने पक्ष र अख्तियार नेतृत्वमध्ये को इमानदार र फटाहा छ भनेर ? सहजै पत्ता लाग्नेछ । आज अख्तियारको नेतृत्वलाई पटकपटक आरोप लगाउनेले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्दै स्रोत खुलाउन सक्छन् ? के उनीहरूमा त्यो हिम्मत छ ? सुशासनको ब्यारोमिटरमा के उनीहरू नापिन तयार छन् ? यो गम्भीर प्रश्नको उनीहरूले उत्तर दिनुपर्नेबेला पनि छिट्टै आउने नै छ ।
अब अख्तियारले आमजनतामा गहिरो छाप छोड्ने गरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीविरुद्ध विगुल फुक्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारको जरा कहाँ कहाँ कोसँग पुगेको छ त्यसको एकएक खोजी गरी भ्रष्टाचारीलाई जेलमा पठाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । विभिन्न सरकारी निकायसँग मिलिमतो गरी भ्रष्टचारको आहालमा डुब्दै रहेका निजी संघसंस्थामाथि पनि अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारकै निकायसँग मिलेमतो गरी सरकारी सम्पतिको दोहन गर्न उद्धत अन्य संघसंस्था र व्यक्तिलाई पनि एकएक खोजी गर्नुपर्छ । कसैको आग्रह पूर्वाग्रही आरोपबाट अख्तियार विचलित हुन जरुरी छैन । भटाभट काम देखाउनुपर्छ । भ्रष्टचारीको रंग रूप र आकार हँुदैन । त्यसैले के ठूला के साना सबैलाई एक÷एक खोजी गरी कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारी निकायसँगको तस्कर र माफियाको जालोको समुल नष्ट गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राज्यका विभिन्न महŒवपूर्ण पदमा रहनेसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्र्दैै अकूत सम्पति आर्जन गर्ने अपराधीका अहिले सबै बाटा बन्द हुन थालेपछि उनीहरू बर्बराउन थालेका छन्
आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभागलगायतका सबै विभाग र सबै मन्त्रालयका नेतृत्वमाथि नियमित रूपमा नै उच्च निगरानी राख्नुपर्छ । विगतमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा लुकाइएका सम्पतिको खोजतलास गर्नुपर्छ । गैरकानुनी काम गरेबापतमन्त्री, सचिव तथा उच्च पदस्थले तस्कर माफियासँग टिप्सका रूपमा पाएका करोडांै मूल्यका जग्गा तथा अन्य भौतिक वस्तुको समेत एक-एक खोजतलास गर्नुपर्छ ।
सुशासन कायम गर्ने विषयमा अख्तियार कहिल्यै डगमगाउनुहँुदैन । अहिलेको अख्तियारको नेतृत्वमा नैतिकता, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्टता भएकाले ढिलो चाँडो राम्रो परिणाम आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अख्तियारमा सोहीअनुसारको ‘डायनामिक’ टिम फर्मेसन गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक निकायले राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुसार प्रभावकारी काम गर्दै जाने हो भने उनीहरू स्वःतह सफल हुनेछन् र जनताको सहयोग र साथ पनि पाउँदै जानेछन् । त्यसपछि अहिले उनीहरूविरुद्ध फैलाइएका गलत हल्ला र आरोप साबुनको फोका जसरी आफंै बिलाएर जानेछन् । सर्वोच्च अदालतले पनि राम्रा काम गर्नेहरूलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नगरी न्यायकै पक्षमा फैसला दिने भएकाले त्यसको चिन्ता गर्न जरुरी छैन ।
सुशासन नहँुदा सार्वजनिक निकायमा बस्नेको नैतिकतामा ह्रास आउँछ, राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हावी हुन्छ । यसैगरी दण्डहीनता समेत मौलाउन सक्ने, गरिबी फस्टाउने, विकास सुस्त हुने, सदाचार नहुने, विकास र समृद्धि रोकिने, सेवा प्रवाह पूर्णरूपमा अप्रभावकारी हुने जस्ता ठूलाठूला समस्या देखिन सक्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको विकास र समृद्धि बाटो अवरुद्ध हुन सक्छ । बाहिर सुशासनको रफ्फु भर्ने र आडम्बर गर्ने तर भित्रभित्र कुशासनको चक्र चलाउँदै कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति भएकालाई अहिले मुलुकमा व्याप्त आर्थिक बेथिति र अपराध रोक्ने भन्दा पनि संवैधानिक निकायलाई पंगु बनाएर आफ्नै स्वार्थसिद्धि गर्ने खेलमा छन् तर निश्चित छ, उनीहरू आफूले खनेको खाल्टोमा आफंै पर्नेछन् । अख्तियारलगायतका निकाय त्यस्ता कुतŒवले खनेको खाल्टो पुर्दै मुलुकका व्याप्त बेथिति र विकृति रोक्न अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
हामी कहाँ वर्षौंअघिदेखि जहाँतहीँ भ्रष्टचार व्याप्त हुँदै आएको छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार, छपाइमा भ्रष्टाचार, निकासी पैठारीमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसैगरी, सुन तस्कर गरी तस्करले पैसाको पहाड थुपार्दै आइरहेका छन् ।
सुकुमबासीका नाममा जग्गा हत्याउने भूमाफिया, राष्ट्रिय सम्पतिका रूपमा रहेको ढुंगा, गिटी बालुवाको तस्करी गर्नेलाई पनि अब छोड्नु हँुदैन । सबैखाले आर्थिक विकृतिको समूल अन्त्य गर्नेगरी अख्तियार अब जाग्नैपर्छ । त्यसरी जाग्दा जनता अख्तियारको साथमा हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा महाभ्रष्टको प्रहार पनि खानुपर्नेहुन्छ तर आमजनताको अघि त्यस्ता महाभ्रष्टको प्रहार निस्तेज हुनेछ ।
बिचार Kumar Raut - April 6, 2020 0
मान्छे मरणशील प्राणी हो । यसो त यो संसारमा रहेका हरेक जीव मरणशील छन् । ढिलो वा छिटो कुनै न कुनै बाहनामा तिनीहरूलाई जानु...
प्रमुख Sushila Bishwokarma - November 6, 2020 0
गरिबी र आत्महत्या
बिचार लालदेव सरार्फ - August 17, 2020 0
लालदेव सरार्फ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरि बर्सेनि करिब ८ लाखको संख्यामा मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जना र एक...
खेल Kumar Raut - September 19, 2020 0
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - September 29, 2020 0
भर्खरै Roshan Shrestha - March 20, 2020 0
Breaking News Dhruba Lamsal - May 16, 2020 0